Mandeha fitsangatsanganana - Inona no torohevitra tsara indrindra hampiharina? | Bezzia
Susana godoy | 14/01/2022 12:00 | Tsangatsangana
Mandehana manao dia, mitadiava toerana vaovao ary tapaho ny fifandraisana Izy ireo dia telo amin'ireo zavatra tena tiantsika matetika ary mifandray. Ankoatr'izay dia tsy maintsy lazaina fa tena ilaina amin'ny fahasalamantsika ara-tsaina ihany koa izy ireo. Koa raha mieritreritra ny hanao dia lavitra ianao, dia tsara raha manomana mialoha ny zava-drehetra mba tsy ho diso fanantenana.
Ankoatra izay dia avelanay ho anao toro-hevitra tsara indrindra ahafahanao mampihatra azy ireo. Torohevitra tena mahasoa izay fantatsika fa tsy tsikaritsika foana raha tsy efa tara loatra. Noho izany, nanao ny lisitra ho anao izahay. Ianao ihany no mamaky azy io amim-pahatoniana sy manoratra azy tsara. Mirary fety sambatra!
1 Aza mitondra ny vola rehetra amin'ny toerana iray
2 Miloka amin'ny fahafantarana toerana akaiky kokoa
3 Manaova fikarohana alohan'ny handehananao
4 Raha te hitsitsy ianao dia mahaiza mandanjalanja
5 Aza manao akanjo be loatra raha mandeha dia
Aza mitondra ny vola rehetra amin'ny toerana iray
Tsy mampaninona izay fitaovam-pitaterana hampiasaina amin’ny dia. Ny tsara indrindra dia ny tsy hitondranao ny vola rehetra amin'ny toerana iray. Azonao atao ny mitondra ny sasany miaraka aminao ao anaty paosinao ary ny sasany ao anaty kitaponao, sns. Amin'izany fomba izany ihany no hiantohana fa, amin'ny tranga tsy ampoizina, dia tsy voatery ho very ny zava-drehetra. Marina fa tsy maintsy mitondra zavatra isika fa tsy be loatra. Amporisihina foana ny manana karatra izay mety tsy manam-bola be loatra fa ampy amin'ny dia ary tsy any no misy ny fandaniana mahazatra na ny sisa amin'ny faktiora. Mazava ho azy fa tsy azo atao foana ny manana mihoatra ny iray ary tsy ilaina koa.
Miloka amin'ny fahafantarana toerana akaiky kokoa
Marina fa raha manontany antsika izy ireo hoe inona ny dia ny nofinofy na ny toerana tiantsika haleha, dia hanonofy anarana lavitra izy ireo ho fitsipika ankapobeny. Eny, tsy maintsy lazaina izany amin'ny fotoana maro hahazo surprise lehibe isika raha mijanona akaiky kokoa ny toerana misy antsika. Satria isika koa dia voahodidin'ny vondrom-piarahamonina sy tanàna hojerena. Ankoatr'izay, azo antoka fa hahita tolotra lehibe ihany koa isika satria tsy faritra fizahan-tany manokana izy ireo.
Manaova fikarohana alohan'ny handehananao
Raha toa ka lasa entin'ity toerana lavitra ity ianao amin'ny farany, dia mendrika ny hanadihady kely momba izany. Ankehitriny dia manana ny teknolojia eo am-pelatananay izahay ary amin'ny tsindry iray afaka mahafantatra ny fomba amam-panao rehetra, ny sakafony ary ny toerana be mpitsidika indrindra. Noho izany, tsy maninona raha manana zavatra nomaninao momba ny zavatra hotsidihina ianao. Eny, marina fa rehefa misy ireo drafitra ireo dia mety hiova arakaraka ny fotoana, fa farafaharatsiny, afaka manana zoro tsy maintsy jerena ao an-tsaina isika.
Raha te hitsitsy ianao dia mahaiza mandanjalanja
Hevi-dehibe iray hafa rehefa manao dia ny te hitsitsy ny fandaniana. Eny ary, raha te-tsy handany vola be fotsiny amin'ny dia ianao, dia tokony ho malefaka amin'ny andro na ora amin'ny ankapobeny. Satria raha mitady andro voafaritra ianao ary mandeha amin'ny faran'ny herinandro dia hiakatra ny vidiny. Toy izany koa no mitranga amin'ny toerana sasany, izany no nahatonga anay nanoro hevitra anao hiloka amin'ny toerana akaiky na toerana tsy dia fantatra loatra toy ny ao an-tsainay.
Aza manao akanjo be loatra raha mandeha dia
Iray amin'ireo fotoana atahorana indrindra ny fotoana hanangonana entana. Satria toa mila ny zava-drehetra isika ary mihoatra noho izany, fa mampiasa latsaky ny antsasany. Noho izany, arakaraka ny vanim-potoana dia hanao ny akanjo fototra sy ny kiraro tena mahazo aina ho an`ny andro ary ny iray mety ilaintsika anio alina. Ny tsara indrindra dia ny miloka amin'ny hevitra fototra izay afaka manova fomba any aoriana ary manome antsika fijery faharoa amin'ny alàlan'ny fanampiana kojakoja. Misy zavatra mitranga amin'ny akanjo mainty, na amin'ny pataloha jeans sy blouse fotsy, ohatra. Ny hany sisa tavela dia ny hankafizanao raha handeha hanao dia.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Tsangatsangana » Ny toro-hevitra tsara indrindra amin'ny dia
Ny fahazarana mahasalama izay manampy anao hahatsapa ho salama